ऋचाको ‘कमब्याक’ - मनोरञ्जन - नेपाल
म्युजिक भिडियो मोडलिङमा रमाइरहेका बेला विकास आचार्यले नाईं नभन्नु लमा हिरोइन बनाए, ऋचा सिंह ठकुरीलाई । चल्तीका स्टार जीवन लुईंटेलसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदा उनको खुसीको ग्राफ अझ माथि उक्लेको थियो । त्यसमाथि फिल्म व्यावसायिक रुपमा हिट पनि भयो । त्यसपछि त के चाहियो र, ऋचाले भटाभट फिल्म खेलिन् । मनमनै मन पराएँ, माया गर ल, खुड्किलो, म तिम्रै भइसकँे आदि–आदि । तर, दुर्भाग्य ! कुनै फिल्मले उनको साख जोगाएनन् । फिल्म पाउन मुस्किल हुन थाल्यो । त्यही छेकोमा गैरआवासीय नेपाली गजेन्द्रराज थापासँग विवाह गरिन् । विवाहपछिका तीन वर्ष घरजममा व्यस्त भएकी यी हिरोइन नयाँ फिल्म लिएर आएकी छन्, सुपर गोर्खे । फिल्मलाई उनकै पतिले निर्देशन गरेका हुन् । लगानीकर्ता पनि ऋचा आफैँ । नयाँ हिरोइनहरुको बोलवाला भएको यो समयमा उनको ‘कमब्याक’ कस्तो होला ? २९ मंसिरमा सुपर गोर्खे प्रदर्शनपश्चात् नै थाहा हुनेछ ।